Amathiphu eBerlin - eJalimane - izinto ze-10 - 1aviagemPlay
Amathiphu eBerlin - eJalimane - izinto eziyishumi
Okuthunyelwe kwangaphambilini: Ungazisongela kanjani izingubo ngaphandle kwensimbi
Okulandelayo: Intaba-mlilo kanye nesimangaliso ohambweni lokuqala lokuya eChile
Kuthunyelwe 7 Mashi 2019 por Rômulo Lucena
Yini okufanele siyilindele eBerlin, inhloko-dolobha yaseJalimane? Lezi zeluleko zikhona kunoma ubani owenza uhambo lwakhe lokuqala.
Uma kukhona into eyodwa uBerlin enendawo yokuvakashela kuyo. Iningi lalo linenani lomlando, kusukela odongeni, elidumile emhlabeni, iBall Berlin; emasinagogeni, iziteshi ezihamba ngaphansi komhlaba, izikhumbuzo, amapaki, izikwele, amasango ngisho nezibani zomgwaqo! Ngamafuphi, idolobha liphefumula umlando, ngoba laliyindawo lapho izenzakalo zezimpi zezwe zokuqala nezesibili zenzeka khona. Iqiniso liyatshelwa, iBerlin ishintshe umlando wobuntu emhlabeni jikelele futhi inesibopho sokuguqulwa kwezenhlalakahle, amasiko nezomnotho, kuze kube yilapho sifinyelela imiphakathi njengoba sikwazi namhlanje.
Ngakho-ke hlalani lapho futhi sinesicebiso kulokho okuzovakashela ohambweni lwakho lokuqala ukuya eBerlin.
Ngizozama ukwenza okwesikhashana futhi ngenze uhlu oluphezulu lwe-10 yalokho okuzovakashela edolobheni.
I-1- I-Wall Berlin
Ngicabanga ukuthi lena yinto esemqoka, okuyimfuneko kunoma ubani ovakashela eBerlin.
Futhi ngani? Kuzo zonke izincazelo nomlando aziletha naye. Udonga lwaluyisimo esiphezulu sokuhlukaniswa kwezwe phakathi kwe-capitalist kanye ne-socialism. Indaba yakhe ibonisa ukuthi isintu singenza kanjani izinto ezingenangqondo ngaphandle kokulinganisa imiphumela. Futhi futhi kungani umphakathi udinga ukulandela eduze isenzo sabaphathi hhayi nje ukulandela ngokulandelela imiyalo enikeziwe.
I kokudilika oDongeni 1989 sikhombisa reconnection kwedolobha eJalimane, sihlangane nezinye izihlobo eziningi zokunqoba inkathi amnyama, wahlala emhlabeni wonke. Ngingasho ukuthi kuzofana nokuphela kobandlululo eNingizimu Afrika.
Phakathi kwezingxenyana zedonga laseBerlin engangizalwa ngalo ukuphila. Ithemba ngekusasa.
I-2- I-Checkpoint Charlie
Kwakuyindawo yezempi eyayigcina umngcele ophakathi kweNtshonalanga ne-East Berlin ngesikhathi udonga lukhona futhi idolobha lahlukaniswa. Ukuze uhambe ukusuka ohlangothini olulodwa ukuya kwenye ye-CITY. Futhi ngagcizelela leli dolobha ngoba asikhulumi ngokulawulwa kwemingcele phakathi kwamazwe, kodwa ngaphakathi kwedolobha ngokwayo yezwe elifanayo. Lokhu kuyinqaba kakhulu. Cabanga uvuka ngosuku olulodwa futhi ungakwazi ukuvakashela umndeni wakho, noma abangane bakho, ngoba nje bangaphesheya kwedolobha?
Yebo, yonke imithetho ihlukile futhi kulokhu kwakungenjalo. Esikhathini sokubuka uCharlie ungadlula ngaphesheya kweBerlin kuya kwenye. Kodwa, kufanele ube yilungu lezinhlangano zama-Allied noma i-diplomate yangaphandle. Futhi kusobala ukuthi uyadluliselwa.
Namuhla, ingenye yezindawo ezinabantu abaningi abavakashi. Wonke umuntu ufuna ukuthatha isithombe sendlu nesignali edumile ethi "Usukela emkhakheni waseMelika"! Usukela emkhakheni waseMelika.
I-3- Alexanderplatz ne-TV Tower
Kuyindawo enkulu yaseBerlin ematasa. Kulo linye yeziteshi ezisemgwaqweni ezisemgwaqweni yedolobha. Futhi udlulise imigqa eminingana, ngaphandle kokuthi ube yindawo enezinketho zokuthenga.
A Umbhoshongo we-TV (I-Fernsehturm) ekhoneni lesi sikhulu, inamamitha angu-368 futhi isakhiwo esikhulu kunazo zonke eBerlin. Umbhoshongo wokusakaza. Ngaphezu kwalokho kunendawo yokudlela yase-panoramic ngombono wamadigri angu-360 edolobheni. Kubuye kuguquke, ngakho ungabona idolobha ngaphandle kokuvuka esihlalweni! (Ithebhu lonke lihlala mayelana nemizuzu ye-30).
Umbhoshongo we-TV ku-Alexanderplatz
Futhi kungani umlando umbhoshongo?
Umbhoshongo we-TV kufanele ube yisakhiwo esiphezulu kukho konke futhi sibheke ukunqoba kwezenhlalakahle phezu kwe-capitalist. Umqondo wukuthi indawo yombhoshongo we-TV ifana ne-Soviet satellite Sputnik (i-satellite yokuqala ithunyelwe ngempumelelo emkhathini) futhi kufanele ibe nombala obomvu, umbala wezenhlalo. Nokho umakhi Bruno Flierl waveza ukuthi umbala metallic ubonisa ukufana okuningi nge-Sputnik satellite, emelela ukuphakama zobuchwepheshe lamazwe sezenhlalo.
Ubungcweti benziwa nguHermann Henselmann noJörg Streitparth, ngeminikelo evela kwabanye abakhi abanjengoFritz Dieter, Günter Franke, Werner Ahrendt Walter Herzog noHeinz Aust.
I-4- Isango laseBrandenburg
Phezulu kwesango laseBrandenburg
Isango elikhulu laseBrandenburg laliyingxenye yamasango ahlinzeka ukufinyelela eBerlin lapho idolobha liseyingcosana futhi lizungezwe udonga, uhlobo lwenqaba. Namuhla mhlawumbe iposikhadi edume kakhulu eBerlin. Isango laseBrandenburg lisendaweni yasePariser Platz esifundeni esiphakathi.
5- City Park noma iTergergen
Lokhu kungalingana ne- “Central Park” eNew York noma i- “Parque da Cidade eBrasília”. Kukufanele ukuvakashelwa kulabo abafuna ukuthatha ikhefu futhi baphefumule umoya omusha phakathi kwezakhiwo eziningi zomlando edolobheni laseBerlin.
6- Isiteshi Sezipoki - “Isiteshi Somoya”
Bambalwa abantu abazi kodwa kukhona isiteshini sesitimela esiseduze eBerlin. Awekho izimoto ezisemgwaqeni, akukho ukubhokha noma ukuphuma. Futhi cha, akahambanga. (Noma okungenani hhayi ukuthi ngiyazi). Kodwa ukuze ungaphumeli umbuso kungokomlando.
Yisiteshini sesitimela esilondolozwe kusukela ngeMpi Yezwe II futhi kusukela ekwakhiweni kweBell Berlin. Ngomgwaqo ongaphansi komhlaba abantu basuka eMpumalanga Berlin baya eNtshonalanga Berlin. Lo mbono wawulula. Njengoba kwakungenakwenzeka ukudlula, ngoba kwakukhona udonga oluqaphile oluhlukanisa umuzi. Khona-ke siya ngaphansi, sisebenzisa umhubhe ongaphansi komhlaba.
Uhulumeni wathola ukuthi abantu benza lokhu kuwela (okwephula umthetho ngaleso sikhathi) futhi banquma ukuvimba le ndima. Inkinga ukuthi bavimbela bobabili baphela ngesikhathi esisodwa futhi abazange bafune ngisho nokuthi ngubani ophansi lapho. Akudingeki ukuthi, abantu abaningana bafela lapho ngomzamo wokufinyelela kolunye uhlangothi. Yingakho ibizwa ngokuthi isiteshi seghost. Ngenxa yabantu abafelwe khona. Futhi kwagcinwa ukuze igcinwe emlandweni odabukisayo wehlukanisa eBerlin, kuyoba okufana nesikhumbuzo semvelo. Naphezu kokubuyiselwa kuqhubeka nokuklanywa kwe-1960, kungenzeka ukubona amakholi kanye nezitimela zangaleso sikhathi njengoba zikhona lapho zihlukanisiwe. Ngakho akukho izitimela zasemgwaqweni ezidlula.
7- Hitler Bunker noma uFührerbunker
Enye indawo okufanele ukwazi ngayo kuyoba yiFührerbunker.
Kwakuyindawo lapho uHitler aqoqa khona inkulumo kahulumeni wakhe futhi wahlela amasu akhe empi.
Le ndawo yayiyimitha eyi-5 ejulile emhlabathini futhi ibe namamitha angu-4 amaningi wokukhonkolo ukuyiqoqa. Umqondo ukuvikelwa esiteshini sezindiza. (Sikhuluma ngesimo sempi yesibili sikhumbula?).
Yilapho isidumbu sikaHitler sitholile sifile. Bathi wabuza amasosha akhe ukumbulala ngenxa, bebona ukuthi uhulumeni wakhe wawuzochitheka ayehlasela futhi indawo yayo amabutho azihlanganisa wayazi wayezobulawa. Khona-ke engqondweni yakhe egulayo ingase ivumeleke kakhulu ukubulawa amaNazi kunokubulawa kwesandla sesitha. Njengoba kungekho muntu owaba nesibindi wagcina ngokuzibulala hhayi kufanele bazinikele amabutho ahlaselayo.
Ngokunaka ukubaluleka komlando wale ndawo nomthwalo owulethayo, i-germany entsha inqume ukuthi kungakuhle idilize le ndlu bese kwakhiwa isikwele phezu kwayo. Lokhu bekuyindlela yokuletha incazelo entsha nokubuyisela isikhala emphakathini. IBunker nayo ingabonakala kwifilimu ethi "Ukuwa, amahora okugcina kaHitler"
Indawo ye-Hitler bunker
I-8- IPhalamende laseJalimane noma i-Reichstag
Palace Reichstag (hashtag akulungile! LOL 😂😂) ufanelwe ukuvakasha ngoba kwaba lapho konke kwaqala umlando endaweni futhi madness kaHitler. Kwakukhona umlilo emgodini, mhlawumbe owabangelwa umgqugquzeli wamaKhomanisi, owaboshwa ngaleso sikhathi. U-Adolf Hitler, owayenguKhansela waseJalimane ngaleso sikhathi, wasebenzisa lesi simo futhi watusa umongameli (owamukela kalula) ukwenza isimemezelo seReichstag. Lesi simiso sisuswe iningi lamalungelo abantu abantu. Futhi ekuqaleni kwenkulumo yamaNazi. Kwavela lapho lapho ezinye izintandokazi zanikezwa, njengokwakhiwa kweBall Berlin. Ungakhohlwa ukuvakashela idome lakhe.
I-9- I-Holocaust Memorial
Lesi sikhumbuzo, esakhiwe nge-block yekhonkolo ye-2.711 yezingqimba ezihlukahlukene futhi ephansi engalingani ifuna ukuletha isivakashi umuzwa wokuphazanyiswa, ukwesaba nokuhlupheka ukuhamba. Yilokho okwenzeka kumaJuda ngesikhathi sokubusa kukaHitler. Kukhona igumbi eliletha ulwazi oluningi mayelana nesikhumbuzo namaJuda.
Ukuphela kwesikhumbuzo se-holoscausto
10- Qaphela izimpawu zomgwaqo (Ampelmann)
Njengoba ngishilo ekuqaleni kwalokhu okuthunyelwe, konke eBerlin kuwumlando! Ngisho nokukhanya kuthwala kancane.
I-Ampelmann, noma ngesiJalimane, i-Ampelmännchen, - iyisimboli senkolo ozoyibona kakhulu eBerlin. Ungunodoli ohlukile kumarobhothi.
Kungani i-Ampelmann ibalulekile?
Iphawula i-East Berlin, lo mfanekiso ungakunikeza umqondo wokuthi ungubani edolobheni. Engxenyeni esentshonalanga izibani zethrafikhi zashintshwa zibe yizinga elivamile kakhulu.
Ngaphezu kwalokho kwenzelwa isazi sezengqondo, umdwebi, umklami konke lokhu ndawonye emfanekisweni womuntu oyedwa. Umkakhe walandela ukuthuthukiswa kwesimboli futhi wamnika ukusekelwa okukhulu ngenkathi kudalwa lokho namuhla okungaba uphawu olukhulu kakhulu emndenini.
UKarl Peglau udale u-Ampelmann ukuthi abe "muhle futhi asebenze". Onodoli ababili (bokuma nokuqhubekela phambili kwabahamba ngezinyawo) baklanyelwe ukwenza ngcono umkhakha wokubuka wabantu ababona kancane. Isigqoko, ngaphandle kokumaka isitayela sesikhathi, futhi sisebenza ekuthuthukiseni umbono wokuhamba. Ngokusho kukaKarl Peglau: "indawo inkulu, ukukhanya okukhulu, ukubonakala kungcono".
Ngaphezu kwalokho, lapho lo "doli" ayemuhle ngokwengeziwe, ukukhanga kwengqondo okungcono okwakungaba nakho kubantu ukuthi babuke irobhothi.
Ayikho enye uphawu lokukhanya emgwaqweni emhlabeni othuthukiswe ngokucophelela ngaphansi kwezici zobuchwepheshe nezengqondo njenge-East Ampelmännchen. Ukuphila komdali wayo kuhlotshaniswa nekaBerlin.
Lapha sifeza amathiphu ethu okuhamba eBerlin. Futhi une-tip eyodwa ngaphezulu? Noma iyiphi enye indawo okufanele ibe kulolu hlu?
Shiya khona lapho emazwana. Futhi uma uthanda, ungakhohlwa ukujabulela nokuhlanganyela.
Kuze kube yilapho olandelayo 😎!
AFRIKA E-ASIA IYUROPHU NORTHAMERICA Oceania ENingizimuAMERICA
Kanjani Alemanha Berlin Kanjani uhambo lokuqala
Rômulo Lucena	Buka Konke →
Joyina 139 nezinye ababhalisile